Unyanzvi Gwara |
Inopenya Mvura Kuzadza Machine
3-5L Mvura yekuzadza Mashini
5 Gallon Mvura Kuzadza Muchina
Carbonated Soft Inozadza Mashini
Asina-kabhoni Beverage Kuzadza muchina
Energy Inwa Kuzadza Machine
PET bhodhoro Juice Kuzadza Machine Line
Doro Waini Doro yekuzadza muchina
Oiri Flling Machine Line
Kurapa Kwemvura Sisitimu
Chikafu Chizadza Muchina
10ml Ziso Kudonha Liquid Kuzadza Machine
Doro Kuzadza Muchina
Piritsi, Capsule uye Piritsi Yekuzadza Machine
Cream Tube Kuzadza Sealing Machine
Cream Bhodhoro Kuzadza Machine
Shampoo Kuzadza Machine Line
Chipikiri ChiPolish Kuzadza Muchina
Otomatiki Ruoko Sanitizer Kuzadza Machine Line
Cold Glue Kunyora Muchina
Hot Melt Glue Kunyora Muchina
Shrink Sleeve Kunyora Muchina
Mvura Sachet Kurongedza Machine
Mukaka / muto / imwe Liquid Sachet Kurongedza Muchina
Sauce / peta Bhegi Kurongedza Muchina
Upfu kurongedza Machine
Kofi Bhinzi / Nuts / Granules Kurongedza Muchina
Tea Bhegi Kurongedza Muchina
Juice Sachet Kuzadza Capping Machine
Horizontal Apex Machine
Chii chaunofanirwa kugadzirira yako nyowani yekupenda fekitori fekitori?
Vatengi vazhinji vanoda kupinda mu spray spray yekugadzira indasitiri vanoda kuziva kuti ndedzipi gadziriro dzinofanirwa kuitwa pamberi pekugadzirwa. Chinyorwa chinotevera chinokuzivisa iwe zvakadzama kubva kumatatu ezvinhu zvemidziyo, nharaunda nemidziyo. Kana iwe uri mutsva, chinyorwa ichi chinogona kukubatsira. ...
Chii chinonzi coding muchina? Une zvingani zvingasarudzwa zvaunazvo zvekuwedzera purindaini pane yako yekuzadza kurongedza tambo?
Chii chinonzi Coder? Vazhinji vatengi vakabvunza uyu mubvunzo mushure mekugamuchira iyo kotesheni yechinamato yekunyorera muchina. Iyo coder ipurestwa yakapusa pane zvinyorwa. Ichi chinyorwa chinokuzivisa iwe kune akati wandei akakurisa purinda pane yekugadzira mutsara. 1, Coder / Coding Machine Iyo yakapusa macoding muchina ndeye co ...
Chii chiri kukanganisa hupenyu hwebasa remuchina?
1. Chekutanga pane zvese: Hunhu hwemuchina. Vagadziri vakasiyana uye mhando dzakasiyana dzemuchina dzinogona kushandisa zvemagetsi zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana uye kumisikidzwa. Mushini uyu unoumbwa nenzira dzakawanda, uye mashandiro ega ega akapindirana nezvinhu zvakasiyana. Iyo yepamusoro iyo ...
akataura uye akagadzika-chinzvimbo
ne admin pane 19-12-16
iye musiyano uripo pakati peiri roller bhandi mhando uye yakamisikidzwa-chinzvimbo mhando yekutenderera bhodhoro kunyorera Nguva zhinji, vatengi vanovhiringidzika nekutenderera bhodhoro rekunyora muchina neakataura uye akagadzika-chinzvimbo chinzvimbo. Ivo vanogona kunyorera kutenderera bhodhoro. Ndeupi mutsauko iwo? Tinga sarudza sei muchina wakakodzera? Ngatitorei mukati ...